Posted by Tranquillus | Déc 3, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Xushmad loogu talagalay iimaylka xirfadlaha ah: "pending"
Farshaxanka waraaqaha waa la baran karaa. Waa run in ay aad isugu egyihiin qaadaha iyo a boostada xirfadeed. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshaha qaar ayaa weli ah. Khatarta suurtogalka ah ee u gudbinta khaladaadka aad inta badan ku samayso iimaylkaaga iimaylkaagu waa muhiim. Markaan isticmaalno weedha asluubaysan "Pending ...", doorashada weedha ay tahay in la raaco maaha mid bilaash ah. Ka hel, maqaalkan, qaacidada asluubta ku habboon.
Gaarka ah ee odhaahda asluubaysan "La sugayo..."
"Iyagoo sugaya jawaabtaada...", "Iyagoo kaa sugaya jawaab wanaagsan...". Dhammaan kuwan waa tibaaxo edeb leh oo loo isticmaali karo sidoo kale xaraf sida a email xirfadle.
Si kastaba ha ahaatee, odhaahda asluubaysan ee "Pending..." waa in ay raacdo mawduuc. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah inay tahay diidmo. Si kale oo loo maro waa khalad.
Markaad qorto, tusaale ahaan, "Iyadoo la sugayo jawaabta wanaagsan ee codsigayga, hel Mr. Agaasime, muujinta mahadnaqa qoto dheer", si adag u hadla, ma jiro mawduuc. Haddii aan mid raadino, waxay u badan tahay inaan heli lahayn qaatahaaga, taas oo dhammaan u muuqata mid caqli-gal ah, marka loo eego inaad adiga tahay cidda sugaysa oo aan ahayn wariyahaaga.
"La sugayo...": Kelmadee ayaa la dhammaystirayaa?
Hase yeeshe, erey bixinta saxda ah waa sida soo socota: "Iyadoo la sugayo jawaabta wanaagsan ee codsigayga, fadlan aqbal, Mudane Agaasime, muujinta mahadnaqa qoto dheer" ama "inta la sugayo helitaanka heshiiskaaga, fadlan aqbal dammaanadda tixgelinta ugu sareysa".
READ Macallimow nuxurka iyo foomka qoraalkaaga
Intaa waxa dheer, waxa kale oo lagama maarmaan noqon doonta in la hubiyo in ay jirto iswaafajin gaar ah oo u dhexeeya qaacidada rafcaanka iyo qaacidada kama dambaysta ah. Markaa, marka aad tidhaahdo tusaale ahaan, "Mudane Agaasime" rafcaanka, qaacidada kama dambaysta ah ee tan ku habboon: "Iyagoo laga war sugayo jawaabta habboon ee codsigayga, fadlan aqbal, Mudane Agaasime, muujinta dareenkayga ugu go'an".
Si kastaba ha noqotee, warqad ama boostada waxay mudan yihiin feejignaan. Iimayl ganacsi oo muhiim ah ayaa buuxinaya shuruudo la mid ah. Wax badan ayaad ka heli doontaa wax-akhris si aad u saxdo khaladaadka higgaadda ama naxwaha. Waxay u tahay kalsoonidaada iyo tan ganacsigaaga.
Inkasta oo ay suurtagal tahay in la isticmaalo odhaahyo asluubaysan oo la mid ah warqaadayaasha. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qaabab gaagaaban sida "Daacadnimo", "Daacadnimo", "Daacadnimo" ama "Daacadnimo adigaa leh". Si kastaba ha ahaatee, waa in aad ka fogaataa soo gaabinta sida "Cdt" si xushmad leh ama "BAV" kaaga.
Wax kale oo laga fogaado, emoticons ama dhoola cadeynta. Haddii dhaqamadan ay ku soo noqnoqdaan fariimaha caadiga ah, xaqiiqadu waxay ahaanaysaa inayna ku habboonayn iimayllada xirfadlayaasha ah.
Kelmadee edeb leh waa in ay raacdaa qaabdhismeedka "Pending..."? Diisambar 9, 2021Tranquillus
horeErayada asluubaysan si aad uga fogaato iimaylka xirfadlayaasha ah
socdaDhibaatada internetka: ururinta hagaha tababarka, maaraynta iyo xidhiidhka